Mihamahazo vahana hatrany ny hala-botry, hoy Rakotomalala Fabrice, ben’ny tanàna ary narahina fanafihana mitam-piadiana mihitsy teo aloha teo. Efa miezaka hatrany ny zandarimariam-pirenena ao Fenoarivo manampy azy ireo. Mba hananan’ny isan-tokantrano filaminan-tsaina anefa dia tsy mitsahatra ny mikaroka hevitra ny tenany. Omena fiofanana ihany koa ny kartie mobila raha araka ny fanazavany mba ho tena mpanara-maso ny ao an-tanàna izy ireny. Hohatsaraina ihany koa ny fomba fiasa eo anivon’ny kaominina. Lohalaharana amin’izany ny fomba fandraisana ireo olona mikarakara antontan-taratasy. Nomarihiny fa misokatra amin’ny rehetra ny tenany ho fampandrosoana an’Antsahadinta.